Radio Don Bosco - PLAE V: Faritra telo no misitraka azy
Miantoka ny fampandrosoana maharitra eny amin’ny tontolo ambanivohitra ny ala. Fanamby kendrena amin’ny PLAE V àry ny fandrakofana ala amin’ny faritra telo eto amin’ny Nosy dia ny any Boeny, Betsiboka ary Diana. Kaominina enina amin’ireo faritra ireo no misitraka ny fandaharan’asa. Natao teto Antananarivo ny 20 febroary 2020 ny atrik’asa teknika ho fanombohana ny PLAE V. Fandaharan’asa tsy hifarana raha tsy ny taona 2023.
Mamaly ny tanjona kendren’i Madagasikara hamerina indray ala 4 tapitrisa hektara tafiditra amin’ny lasitra momba ny ezaka andrakofana indray zava-maniry sy ala ny tontolon’ny faritra iray aty Afrika na ny AFR100 ny PLAE andiany fahadimy. Fanapahan-kevitr’i Afrika natomboka ny taona 2015 ka tanjona iraisana ho an’i Afrika ny andrakofana indray ala 100 tapitrisa hektara hatramin’ny taona 2030.
Ezaka goavana tsy maintsy ikatsaha-bahaolana hampiroboroboana ny fambolena eto Madagasikara ny fikahoan’ny riaka ny nofon-tany. Ny doro ala sy doro tanety ary ny fandripahana ny ala no antony iray lehibe mahatonga izany. Manampy trotraka ihany koa ny fitomboan’isan’ny mponina izay mampitombo ny fampiasana ala. Ny 80 isan-jaton’ny tokantrano eto Madagasikara no mampiasa ny hazo mba hatao angovo hahandroan-tsakafo.
Tsy maintsy atao ny fandrindrana ny ala mba ahafahana miaro ny nofon-tany tsy hokaon’ny riaka, mba ahafahana mampiasa ny tany ho loharanon-karena ara-pamokarana. Ho fintantanana sahan-driaka amin’ny alalan’ny ady atao amin’ny fikaohan’ny riaka ny nofon-tany sy ny fitanana maharitra ny ala no iasan’ny tanjon'ny PLAE V. Fandaharan’asa iarahan’ny Governemanta Malagasy sy ny Governemanta any Allemagne manatanteraka amin’ny alalan’ny fiaraha-miasa alemà na ny Coopération allemande.
Sahanina manokana amin’ny PLAE V hoy ny mpandrindram-pirenen’ny fandaharan’asa Ramatoa Voninavoko Marie Clementine ny famokarana ala ho an’ny kaominina, ny fanaovana ala famokarana fambolen-kazo ho an’ny olon-tsotra, ny fanaovana ala vadimboly amin’ny toerana midadasika. Mampiavaka ny andiany fahadimy koa ny fijerena ny toeram-piraofana maharitra ho an'ny omby amin’ny toerana midadasika. Tsy ambanin-javatra ihany koa nefa ny fiantohana ny fananan-tany ho an’ny tantsaha amin’ireo kaominina iasana.